Mhando dzakasiyana dzeWheelchair - Kusarudza Sachigaro
View ngoro "KM-5000-TP - 33 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Kune akawanda marudzi akasiyana e wiricheya zvikamu zviripo parizvino pawebhusaiti yedu. Chikamu chega chega chine mhando dzakasiyana dzakakodzera vashandisi vakasiyana. Zvimwe zvezvigaro zvine zvinhu zvakagadziriswa, izvo zvinoita kuti zvinyatso kukodzera vanhu avo vakajaira kune zvisingabvisike zvikamu.
Fixed armrests inogona kushandiswa pane wiricheya uye ndiyo mhando yerestrest inowanika. Flip back uye bvisika armrests inogona kushandiswa kutendera mushandisi kuti akwanise kuchinjisa chinhu kuvabvumira chinja mukati nekubuda pachigaro zviri nyore.
Rudzi rwakajairika rwechigaro ndiyo ichave iyo wiricheya yemawoko. Rudzi rwechigaro runozvifambisa, uye harubatsirwe nekushandisa bhatiri kana auto propelling system. Rudzi rwechigaro rwakakodzera kune mumwe munhu ane masimba pamusoro pemakumbo ake ekumusoro.
Izvi zvinodaro nekuti rudzi rwakajairika rwechigaro chemanyorerwo chine mavhiri mahombe ekumashure kubvumira mushandisi kuzvisimudzira ega.